Mpivarotra SMS | Mpivarotra hafatra amin'ny hafatra
Wednesday, May 19, 2010 Alatsinainy Janoary 16, 2017 Adam Small
Ny Marketing amin'ny finday dia nanjary ampahany lehibe amin'ny tetibola ara-barotra maro. Ny ankamaroan'ny varotra finday dia tonga amin'ny iray amin'ireo tsiro telo:
Hafatra SMS / hafatra
Ny finday sy ny finday amin'ny finday dia matetika mifandray ary manana singa an-tsary. Ny lesoka amin'izy roa tonta dia ny fandefasana sy fikojakojana azy ireo lafo. Noho io orinasa io dia manomboka ny ezaka amin'ny marketing amin'ny finday amin'ny alàlan'ny SMS, izay niteraka fipoahana ny isan'ny mpivarotra SMS. Ny sasany amin'ireto mpivarotra ireto dia lehibe ny hafa tsy dia be loatra ary ny sasany marina… Ka inona no atao hoe mpivarotra SMS tsara? Ahoana no fomba hisafidianako mpivarotra SMS / Text Messages?
Misy teboka telo lehibe tokony hodinihina rehefa mifidy mpivarotra SMS:
Moa ve ny mpivarotra mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny kaody fohy na mampiasa sms handefasana mailaka? Izay mpivarotra fandefasana hafatra an-tsoratra SMS mendrika ampiasaina dia tokony hanisy fehintsoratra fohy. Ny fampiasana mailaka mankany amn'ny vavahady sms ho an'ny marketing amin'ny finday dia manitsakitsaka ny fe-potoana iasan'ny mpitatitra ary matetika tsy azo atokisana.
Manana mpivarotra manam-pahaizana momba ny varotra finday ve ny mpivarotra Ireo dia manam-pahaizana izay tsy manam-pahalalana fotsiny amin'ny fepetra ara-teknikan'ny torolàlana momba ny Mobile Marketing Association fa tsara koa amin'ny fanampiana anao handefa atiny mifanaraka amin'ny fampitaovana. Ny marketing amin'ny finday dia fantsona tokana noho ny toetrany manokana ary tokony hoforonina ao an-tsaina io hafatra io.
Inona no lazain'ny mpanjifan'ny mpivarotra momba ny serivisy ho an'ny mpanjifany? - Ny mpanjifa sambatra dia mariky ny mpivarotra mahay, toa miharihary sa tsy izany?
Ny Mobile Marketing dia matotra amin'ny sehatry ny indostria matanjaka saingy mbola tanora izy ary maro ny mpilalao ao amin'ny lalao. Hamarino tsara fa manao enti-mody ianao rehefa manapa-kevitra amin'ny mpiara-miasa finday.
Tags: finday-barotraSMSsms marketing
Miresaha amiko amin'ny TokBox
May 20, 2010 ao amin'ny 12: 39 PM
Hevitra tsara, Adam. Ny fisafidianana mpivarotra finday SMS dia azo antoka fa mahamenatra. Jereo ity lahatsoratra bilaogy ity mba hahitana hevitra manan-danja kokoa hodinihina (sy fanontaniana apetraka) rehefa manapa-kevitra amin'ny mpivarotra finday SMS: http://lunchpail.knotice.com/2010/04/28/tips-for-choosing-an-sms-mobile-vendor/